အဆိုပါ Glass ကိုအက္ခရာ တင်. စက်အလွန်လူကြိုက်များသော Is - တံတားစောစက်, ကျောက်ခေတ် CNC စက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ, Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, ထွင်းထုစက်, တံတားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, Waterjet Cutter
နေအိမ် » အဆိုပါ Glass ကိုအက္ခရာ တင်. စက်အလွန်လူကြိုက်များသော Is
5 ဝင်ရိုးတန်းတံတား Sawing စက်
5-ဝငျရိုးကွောငျး4ချိတ်ဆက်တံတား Sawing စက်
5-ဝငျရိုးကွောငျး5ချိတ်ဆက်တံတား Sawing စက်
5-ဝင်ရိုးတန်းတံတား Sawjet စက်
3-ဝင်ရိုးအက္ခရာ တင်. စက်
နှစ်ချက်ဌာနမှူးအက္ခရာ တင်. စက်
ကျောက်ခေတ် CNC စက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ
3 ဝင်ရိုးကောင်တာများ CNC စက်ပစ္စည်းစက်
5 ဝင်ရိုးကောင်တာ CNC စက်ပစ္စည်းစက်
3 ဝင်ရိုး Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
AB 5-ဝင်ရိုးတန်း Waterjet ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
စက်ဖြတ်တောက်ခြင်း AC အ 5-ဝင်ရိုးတန်း Waterjet
Sintered ထိုသို့ကျောက်အ CNC 5-ဝင်ရိုးတံတား sawjet စက်
CNC 5-ဝင်ရိုး4ကျောက်များအတွက်စက် sawing ချိတ်ဆက်တံတား
အမြင့်တိကျစွာ 5-ဝင်ရိုးနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး4ချိတ်ဆက်တံတား sawing စက်
5-ဝငျရိုးကွောငျး5အတူစက် sawing ချိတ်ဆက်တံတား5ဝင်ရိုးဖြတ်တောက်ခြင်းခေါင်းကို
5-ဝငျရိုးကွောငျး5ချိတ်ဆက်တံတားလွှကင်နာစက်
အဆိုပါ Glass ကိုအက္ခရာ တင်. စက်အလွန်လူကြိုက်များသော Is
/ 2019 ဒီဇင်ဘာ / 04
အဆိုပါ Glass ကိုအက္ခရာ တင်. စက်၏အကျင့်လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာဘာလဲ?
/ 2019 အောက်တိုဘာ / 14
Glass ကိုအက္ခရာ တင်. စက်သုံးခုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကျိုးများ
/ 2019 အောက်တိုဘာ / 12
စက်တင်ဘာ / 23/2019
အဆိုပါသုံးဝင်ရိုးအက္ခရာ တင်. စက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလဲ?
စက်တင်ဘာ / 19/2019
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုကြိုးစားကြသည်. တောင်းဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်, နမူနာ & Quote, ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
မူပိုင်ခွင့်© 2021 By Guangzhou Hanyin Network Technology Co., Ltd မှ.